Mishiinada gaarka ah | January 2020
Приобретая участки для загородных домов, многие распахивают территорию и обустраивают огород или сад. Laakiin waxaa jira koox dad ah oo jecel inay ku nastaan ​​qiyaasta ubaxyada iyo cawska. Cawska iyo quruxda leh ee wanaagsan ayaa u baahan dadaal xoog leh, laakiin waxaa jira noocyo kala duwan oo cawska cawska ah si loo xalliyo dhibaatooyinkaas.
Aad bay u adagtahay iibsadaha caadiga ah inuu sameeyo xulashada saxda ah ee suuqa mashiinka casriga ah. Tani waxay sidoo kale khuseysaa iibsashada jajab koronto. Sidaa darteed, ilaa taariikhda, sidaas oo dalbaday jigsawaa jimicsiga korontada. Waxay u oggolaanayaan Macaamilka inuusan ku daboolin badda badda ee qalabka midba midka kale, siin fursada ah in la doorto ikhtiyaarka ugu fiican, oo ku saleysan ujeeddooyinkooda iyo xajmiga boorsada.
Qalabeeyaha batroolkee ayaa fiican
Shidaal bixiye waa qalab wax ku ool ah oo kuu sahlaya inaad si degdeg ah oo sahal ah u sameyso hawlo badan, waqti iyo dadaal. Waxa uu awoodaa inuu beddelo oo keliya maacuunka caadiga ah, laakiin sidoo kale qalab kale. Tixgeli noocyada qalabixinta iyo baro sida loo doorto naftooda ugu fiican, iyadoo ku xiran baahida shakhsiyeed.
Faleereen murugaysan: noocyo, naqshadeynta
Beerta casriga ah waa wax aan macquul ahayn iyada oo aan la isticmaalin qalab. Можно вручную бороться с сорняками и вредителями на дачном участке в пять соток, но для обработки значительных площадей этот метод совершенно не подходит.Qalabka mid ka mid ah beeralay kasta oo doonaya inuu goosashada wanaagsan u baahan yahay waa faleereer.
Qalabka korontada ku shaqeeya ee ugu sarreeya (mastarada korantada)
Awoodda tamarta - waa qalab lagama maarmaan u ah qaybta gaarka loo leeyahay. Waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya in la gooyo qoryaha, laakiin sidoo kale dhismaha, iyo sidoo kale ujeedooyin yar oo guriga ah halkaasoo laga gooyo qoryaha loo baahan yahay. Maanta, waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo tiknoolajiyada noocan oo kale ah, sidaas awgeed samaynta xulashada saxda ah mararka qaarkood way adag tahay.
Benzol Trim Rating
Haddii uu jiro qorshe gaar ah, markaa waa inuu jiraa caws, kaas oo aad u baahan tahay inaad raacdo. Cawska cawska waa in la gooyaa, cawsduna waa in la googooyaa. Waxaad ku sameyn kartaa tan iyadoo la adeegsanaayo bareerka caadiga ah, laakiin ma ahan badbaado inaad shaqeyso. Intaa waxaa dheer, ma aha qalab caalami ah: ma awoodi doonaan in ay ciribtiraan cawska.
Qiimaynta miisaaniyada ee 2018
Beeraha ayaa ugu horreyntii ugu muhiimsan dhulka. Beerta iyo beerta waxaad ku qaban kartaa gacanta, laakiin haddii aagga uu aad u weyn yahay, ma sameyn kartid adigoo isticmaalaya tignoolajiyada muuqaalka. Haddii haddii tareenka dhabta ahi uu u muuqdo mid aad u qaali ah oo qaali ah, waxaa si guul leh loogu badali karaa gawaarida lugta bidix. Si kastaba ha ahaatee, qalabkani waa ka duwan yahay - noocyadu waa ku haboon yahay shaqo gaar ah.
Lifaaqyada loogu talagalay tareenada: noocyada iyo ujeedada
Xitaa adigoo haysta barta yar ee dacha ama beerta, mararka qaarkood waa wax aan suura gal ahayn in la sameeyo caawimaad farsamo oo ah qaabka mootada ama tareen yar. Cutubkani wuxuu awood u yeelan doonaa inuu hagaajiyo geeddi-socod badan oo ku saabsan daryeelka goobta, iyo lifaaqyada, kuwaas oo si ballaadhan loogu heli karo suuqa maanta, si weyn u ballaarin kartaa baaxaddeeda.
Qalajisyo badan oo lagu xoqay geedaha: sifooyinka iyo kala duwanaanshaha, noocyada
Haddii aad go'aansato inaad beerta beerta ka sameyso, markaa waqti xaadirka ah si aad uga fekerto qalabka ku habboon ee aad ubaahan tahay in aad u baahato daryeelka geedaha iyo duurka. Mid ka mid ah kalkaaliyeyaasha beeraha ee ugu muhiimsan waa geedka sare, ama lopper, kaas oo u oggolaanaya in la jarjarey laamaha meel fog oo ku filan dhulka. Waxaan kugu martiqaadaynaa inaad barato naqshadeynta qalabkaas iyo sifooyinka noocyada kala duwan ee suurtogalka ah.